Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 wararka maanta-arlaadii.net » Maamulka Gobolka Banadir Oo Cabasho Badan loo Jeediyay Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
Shaqsiyaad ka tirsan Xafiiska Duqa Magaalada Muqdisho C/raxmaan Yariisow ayaa waxa ay caqabad ballaaran ku yihiin qaybaha kala duwan ee Bulshada iyo Shaqaalaha Gobolka Banaadir qaarkood.
Xubnahan oo ka agdhaw duqa Muqdisho, islamarkaana ah la taliyeyaasha dhanka Warfaafinta ayaa waxaa jira dad badan oo cabasho ah, kuwaasi oo sheegaya inay ka hor istaageen kulamo kala duwan oo ay doonayeen inay la qaataan Duqa Muqdisho.
C/raxmaan Siciid oo ka mid ah dhalinyarada ku nool Magaalada Muqdisho ayaa sheegay laba shaqsi oo ka tirsan Xafiiska Duqa Muqdisho oo magacyadooda uu ku sheegay Shadoor Xaaji & Axmed Nuur inay yihiin dad hor istaaga ku sameeya xubnaha doonaya inay la kulmaan Duqa Muqdisho.
“Waxaan isku dayay dhawr mar in aan la kulmo Duqa Muqdisho aniga oo shaqo raadis ah, balse waa ay ii suuragali wayday laba nin ayaa iga hor istaagay oo dhawr mar anoo la kulmi raba Yariisow iga hor istaagay, waana Shadoor nin ay dhahaan iyo Axmed Nuur.” Ayuu yiri C/raxmaan.
Ka sokow caqabadaha ay ku hayaan bulshada xittaa qaar ka mid ah illaalada Duqa Muqdisho ayaa sheegaya in labadan shaqsi ay yihiin kuwa is laheysiiyay Xafiiska Duqa Muqdisho oo ay adag tahay in bulshada caadiga ay la kulmaan.
Warar kale ayaa sheegaya inay jirto gabar lagu magacaabo Nimco Xabatulows oo ah Xoghaynta gaarka ee Gudoomiye Yariisow, taasi oo ah shaqsiga ugu wayn ee caqabada ay kala kulmaan xittaa Gudoomiyeyaasha Degmooyinka ee taga Xafiiska Duqa Muqdisho.
Nimco oo ah gabar ka timid qurbaha, mudana joogtay Muqdisho ayaa qaar ka mid ah Gudoomiyeyaasha Degmooyinka waxa ay sheegeen marka ay la xiriiraan taleefoonka Duqa Muqdisho inay iyada ka jawaabeyso, islamarkaana xilliyada qaar ay balamo been ah u qabato masuuliyiinta, taasi oo uusan ogeyn Duqa Muqdisho ama aysan ku wargelin.
Shaqaalaha Gobolka Banaadir ayaa si wayn u hadal haayo hab dhaqanka cusub ee ka jira Xafiiska Duqa Muqdisho oo masuul ay ka tahay Nimco Xabatulows.